galmudugnews.com » Xildhibaan Xaaf oo isku dirka Reer Qurdhaale ku baxshay 30.000 $ Dollar.
Home » WARARKA, XULKA Galmudugnews » Xildhibaan Xaaf oo isku dirka Reer Qurdhaale ku baxshay 30.000 $ Dollar. Xildhibaan Xaaf oo isku dirka Reer Qurdhaale ku baxshay 30.000 $ Dollar. galmudug on
No Comment Views 167280Galmudugnews.com – Ganacsade Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ka tirsan Xildhibaanada baarlamaanka tirada ee Somalia ayey fadeexada xoogan wajaheen ka gadaal markii uu Idaacadda Kulmiye uga hadlay hab cunsurinimo iyo qabyaalad ka buuxdo.
Suldaan Cabdi Naasir Jaamac Seed oo la hadlayay Idaacadda Codka Mareykanka ee VOA ayaa Xildhibaan Xaaf ku eedeeyay inuu yahay nin isku dirka beesha Sacad ku caan baxay,hadana uu lacag badan ku bixiyay sidii Raaska Reer Qurdhaale la iskugu diri lahaa.
“ Xaaf wuxuu doonayaa inuu weligii Xildhibaan Sacad ahaado,oo lugooyo iyo mishin ayuu caan ku yahay sidaas darteed sanadkaan lagama yeeli doono “ayuu yiri Cabdi Naasir Jaamac Seed oo la hadlayay VOA Somali.
Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ka jawaabayay eedeeynta Cabdi Naasir Jaamac Seed ayaa yiri “ Anigu weligeey baan ahaanayaa Xildhibaan ,maxaa ka galay Cabdi Naasir Jaamac Seed ,anigu ma isagaan Xildhibaan u ahay,waxaan Xildhibaan u ahay beesha aan ka dhashay ee Cabdalle,iyaga ayaan Suldaan u ahay,tiisa ha daryeelo”
Xaaf oo sheegta inuu yahay Suldaan Sacad ayaa hadalkiisa ka baxay Idaacadda Kulmiye wuxuu la yaab ku noqday beesha Sacad Habargidir.
Baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday in Xildhibaan Xaaf lacag dhan 30.000$ ku bixiyay isku dirka beesha Reer Qurdhaale ,isagoo gacan ka helay Agaasimaha Nabadsugida Axmed Macalin Faqi.
Axmed Ducaale Xaaf oo aad uga walaacsanaa in Cabdi Naasir Jamac Seed kursiga Suldaanimada beesha Sacad uga qeybgalo shirka Odayaasha ayaa ku guuleeystay inuu shirka Odayaasha geeyo nin lagu magacaabo Garaad Qoorweyne oo u dhashay Jufada Reer Qurdhaale.
Jufadda reer Qurdhaale waa dad ku caan baxay Gobanimo ,tol jaceyl,ixtiraam iyo is xaqdhowr,waana markii ugu horeeysay taariikhda ee la maqlo isku dhac ka dhex jira.
Ganacsade Xaaf waa nin wejiya badan oo la rumeeysan yahay inuu gacan siiyo Maleeshiyadda Al-Shabaab ,isagoo dhinaca kalena ka ganacsada Xashiishada ka baxda gobolka Shabeeladda Hoose.
Xaaf wuxuu ku eedeysan yahay inuu ka dambeeyay dilalkii Istarliin Cabdi Caruus iyo Injineer ELMAN Cali Axmed,Allaha u naxariistee.
Beesha Sacad inkastoo ay fahmeen Xaaf inuu yahay halis hulaaban hadana ma jiraan go’aano laga qaatay.
Shaqsiyaad la mida Axmed Ducaale Geelle Xaaf waa kuwa daneeystenimo ku caanbaxay ee burburiyay Qaranimadii Somalia.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21013 hitsContact US - 19640 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15737 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15100 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13935 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13875 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13818 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13335 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11772 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11742 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11716 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11522 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11504 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11355 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11168 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11134 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11053 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11040 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10730 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10350 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10242 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10172 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10010 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 9925 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9776 hits Home About